Dhaaminta Jikada Dhamaadka Sare ee Burushka Nickel Jiidaya
Bogga ugu weyn / Qubeyska jikada / Soodhadhka Qulqulka / WOWOW Qiimaha Ugu sareeya ee Lagu Jiido Qasacadaha Jikada Hal Hole
WOWOW Top Rated Down Jiijooyinka Qufulka Kaliya Kaliya
qiimeeyay 4.98 out of 5 ku salaysan 41 ratings macaamiisha
(41 dib u eegista macaamiisha)
Qalabka jikada ee jikada waxaa laga sameeyay ka samaysan naxaas wanaagsan iyo nadiifinta rasaasta. SUS304 waa jawi saaxiibtinimo leh oo caafimaad qaba, caafimaadkeenuna wuxuu ku xiran yahay ilaaliyahayaga. Waxaa lagu hagaajin karaa wareejin kulul iyo qabow, fududahay in la beddelo, fududahay in la rakibo, classic iyo xarrago leh, waxayna ku habboon tahay qurxinta musqusha iyo jikada kala duwan
· Si jilicsan u cadaya nickel
· Tuubbo biyo dhaadheer oo tayo sare leh hoos u soo jiid
Birta gacanta ee raaxada leh
SKU: 2310301 Categories: Qubeyska jikada, Soodhadhka Qulqulka Tags: Nickel caday, Hoos u jiid, Hal-Hole
41 dib loogu talagalay WOWOW Top Rated Down Jiijooyinka Qufulka Kaliya Kaliya
Waxaan ku bedelnay tuubada jikada moen ee hore mid tan mana ku farxi karo! Ninkayga aad buu ula dhacay markuu furay sanduuqa. Wuxuu helay qasabaddii oo lagu xirey xumbo oo aan la qasin inta lagu guda jiro rarka. Waxa xigay ee uu la dhacay wuxuu ahaa tilmaamaha rakibidda oo ahaa mid cad oo kooban. Dhibaato kasta oo suurtagal ah waxay la xiriirtaa soo saaraha sheygan. Laga soo bilaabo jihada midig ilaa hoos u-habeyaasha iyo maydhayaasha oo ay ku jireen. Rakiibintu way fududahay oo qasabaddu markii ugu horreysay ayay gashay.
Kaftan socod ayaa naga dhexeeya oo ah in mashruuc kasta oo aan qaadano uu qaato saacad ama laba saacadood; waxay na qaadan doontaa 2 maalmood. Ma ahan tan mid aan dhibaato badan ku qabnay ka saarista qasabaddii hore marka la barbar dhigo ka yar markaa 1/2 saac ee la gelin lahaa midkan!
Tuubbo aad u wanaagsan, gaar ahaan markay kuwa badan oo la mid ahi ku baxaan lacag aad u badan. Waxaan ku xirnayn qasabad balaastig ah / aluminium markii aan u soo guurnay gurigeenna cusub. Waxay ka soo daadatay tuubada oo biyo ayaan dhaansanay. Tani waxay ahayd casriyeyn weyn oo hees ah. Waxaan sidoo kale badalnay qalabka wax lagu xiro tan iyo markii ay sii daayeen. Haddii aad dib u dhigeyso mashruucan, waxaan dhihi lahaa tan horta hel oo naftaada ku riix si aad u qabato. Kama niyad jabi doontid.
Ma jecli mashaariicda tuubada. Nasiib darrose, waa inaan rakibo qasabado badan (Moen, Delta, Pfister) intii aan dan ka lahaa inaan xasuusto. WOWOW tani waa tan ugu fudud ee aan abid sameeyo. Halkii aad ku xireyn lahayd saxanka iyada oo loo marayo god dhuuban oo qoto dheer oo noocyada kale ay bixiyaan, tani waxay adeegsaneysaa fur fur aad u fudud marka aad ku buuxiso golaha wasiirada wax aan waxba tarayn oo leh iftiin yar iyo meel bannaan. Khadadka saadka kulul iyo qabow waxaa si cad loogu calaamadeeyay midabeynta, iyo sidoo kale ereyada kulul iyo qabow. Sida gunno dheeraad ah, waxay la timid 3/8 ″ ilaa 1/2 pter adabtarada oo aan u baahanahay inaan ku xiro waalka xirida. Tani waxay iga badbaadisay safar aan ku tagi lahaa dukaanka qalabka. Waa qasabada ugu fiican ee waligeed la rakibo.
Qasabadaha ayaan wax ka iibsaday in yar ka dib waxaan u maleynayay inaan kan siin doono isku day maadaama ay ka dhaqaale badan tahay kuwa kale ee aan soo arkay. Dabcan, waan yara yara argagaxay maxaa yeelay magac weyn ma uusan aheyn oo xoogaa ayaa noo qorsheysan inaan la galno magacyada waaweyn. Waxay u shaqeysaa si aad u wanaagsan xitaa waan rakibi karaa taasna wax badan ayey dhaheysaa (si dhab ah!). Tilmaamuhu sifiican iima caddayn laakiin tani waxay ahayd isku daygaygii ugu horreeyay ee wax sidan oo kale ah (mahadsanid google iyo youtube)! Waxaan ku qasbanaaday inaan iibsado isku xirayaasha kordhinta biyaha si aan u gaaro biyaha madaama qasabadaydii hore ay laheyd khadadka maarta ee adag ee ka soo degaya tanina waxay leedahay khadadka saadka ee horayba loogu xiray. Kordhintu waxay ka yaraayeen $ 10 bakhaar weyn oo qalabka wax lagu kaydiyo ah. Waan ka helay tan maxaa yeelay waxay sidoo kale sifiican ugu dhex jirtaa saxanka jikada ee caadiga ah maadaama aysan aheyn mid dhalaalaya laakiin wali waxay umuuqataa mid cusub oo nadiif ah. Waa iskudhaf fiican oo casriyeyn ah adoon aad loojecleysan. Waan awoodaa inaan si fudud ku soo gaaro dheryaha waaweyn hadana qasabadu maahan mid aad u weyn oo waxay u egtahay meel ka baxsan jikadeyda yar. Si wanaagsan / habsami leh u qulqulaya, buufin / durdur weyn, oo sahlan in la kala beddelo. Qiimo weyn, weyn. Waxaan aad ugu talinayaa. (Si kastaba ha noqotee wax lacag ah dib looma siinin dib-u-eegidgan mana lihi wax xiriir ah oo aan la leeyahay shirkadda. Marwalba shaki yar ayaan ka qabaa dib-u-eegista lacagta la igu bixiyo.)
Lacagta ma garaaci kartid qasabaddan! Waxay leedahay astaamo ay leeyihiin qasabado qaali ah. Geedi socodka oo dhan waa fududahay in la rakibo. Waxaan jecelahay giraanta iyo isku-xidhka isku xidhka si aan ugu xidho qasabadda si ay u degto sagxadda. Tuubbooyinka dhammaantood waa la calaamadeeyay waxayna umuuqdaan shaqo culus. Markaad miisaanka ku dhejiso buufinta ayaa si fudud u soo bixinaysa oo dib uga noqonaysa sidii la rabay. Cilladaha kaliya ee shaqeynaya ee aan arko waa badhanka buufinta. Waxay leedahay badhanka nooca toggliska oo udhaxeeya durdurka caadiga ah, buufinta iyo isku darka buufinta iyo qulqulka. Bedelaadkani waa nooc ka mid ah buuqyada waxayna u dhowdahay inay u wareegto kala badh buufis iyo durdur durugsan adoo taabanaya buufinta. Waqtiga ayaa sheegi doona sida badhankani u haayo. Waxaan kugula talin lahaa qasabadan!
Waxaan u soo iibiyay qasabaddaan wiilkayga iyo gabadha aan sodohda u ahay hadiyad guriga lagu kariyo. Waxay haysteen qasabad hore oo chrome ah oo aan lahayn buufin (mana haystaan ​​weel dhaqe midkoodna). Waxaan markii hore amar ku bixiyay qaabka maarta ah ee b / c waxaan u maleynayay inay u dhigmayaan wixii ay horey u haysteen. Waxay go'aansadeen inay runtii rabaan madow halkii, markaa waxaan ku soo celiyey naxaas bakhaarkayaga xaafadda Kohl (aad u fudud!) Waxaanna dalbaday midka madow. Aan kuu warramee - qasabadani waa bambo! Cadaadiska biyuhu waa wax cajiib ah oo buufiyuhu wuxuu u shaqeeyaa si ka fiican wixii kale ee aan waligay isticmaalay, xitaa ma xusin sida ay u egtahay. Waan yara yara baqay inaan dalbado magac sumadeed waligay ma maqal, laakiin waxaan kula talin lahaa sumadan qofkasta oo raadinaya qasabad adag laakiin aan qaali ahayn. Shaqo Weyn WOWOW !!!
Waxaan ku leenahay guri Park Model ah meel loo dalxiis tago oo ku taal Florida oo leh saxan yar oo laba jibbaaran. Tuubada yar ee aan haysan jirnay marwalba dhibaato ayay leedahay hadii aan dooneyno inaan wax weyn weynaano. Tuubadaani si fiican ayey u shaqeysaa.
Waxaan seddex ka ciyaaray xiddigga maxaa yeelay salka tubbada ayaa waxyar ka weyneyd daloolka saxankeena biraha ah. Waxay ahayd inaan xareeyo si aan u weyneeyo daloolka. Ma hubo in daloolka saxankayagu ka yaraa sidii caadiga ahaa ama haddii salka tubbada ay ahayd mid aan caadi ahayn oo ballaciisu ahaa. Markii aan helay waan rakibay xaaskeygu way jeceshahay. Taasi waa waxa muhiimka ah !!! Sax ??
Waan jeclahay qasabaddayda cusub! Waxaan ka dooday in mid ka mid ah laba jibbaar qiimihiisa aan ka iibsado Gurigayga Guriga ee Maxalliga ahi uu noqon doono "hab" ammaan ah oo aad ku tegi karto, laakiin tan ayaan ku haystay muddo bil ah hadda waana jeclahay. Waa mid tayo fiican leh waxayna umuuqataa sidii qasabadaydii hore (ka qaalisan, magaca xaraashka ah).
Waxaan iibsaday guri cusub hal sano ka hor, dhismuhuna wuxuu rakibay qasabado dhammaadkiisu hooseeyo. Aad ayaan ugu faraxsanahay sida qasabadani u egtahay waxna u qabato. Waxaan dhihi lahaa cabashadeyda kaliya ee yar ayaa ah in biyuhu si xoog ah ku soo baxaan, laakiin waxaan la qabsaday inaan yeesho taabasho khafiifa markaan furayo. Way fududahay in laga beddelo durdur si loo buufiyo, ma aanan isticmaalin badhanka hakadka inbadan inkasta oo ay shaqeyso. Waxaan ku rakibey nin farsamo yaqaan ah dhibna kuma qabin inuu rakibo. Waa qiimo weyn marka la barbardhigo Home Depot ama Lowe's maadaama aysan waxba ka jirin qiimaha noocan ah.
Waxaan siinayaa 5 xiddig ilaa iyo haatan. Waxaan heysanay kaliya hal usbuuc ama wax kale waana jeclahay ilaa iyo haatan. Waxay ahayd wax aad u fudud in la rakibo oo matte-ka lagu dhammeeyo ayaa si fiican ugu fiican miisaskayaga granite. Muddadii yarayd ee aan haysannay waxay durba soo baxday qasabaddayadii ugu dambeysay ee aan soo iibsannay wax ka yar 1 sano ka hor. Iibiyuhu kuma fiicnaan doono wax soo saarkooda. In muddo ah ayaan raadinayey kaniina wuxuu u muuqday kan ugu fiican qiimaha oo wuxuu umuuqdaa inuu leeyahay dib u eegis wanaagsan oo daacadnimo ah. Sidii aan idhi waxay ahayd dhawr toddobaad oo keliya ugu badnaan laakiin dib ayaan ka cusbooneysiin doonaa waxaanan rajaynayaa inay warbixin wanaagsan ka hesho!
Qasabadani waa inay noqotaa sirta ugu weyn adduunka. Si fiican ayey u socotaa, si fiican ayey u egtahay, si fiican ayey u shaqeysaa oo qiime fiican ayaa lagu dhigaa. Waxaan ku badalnay qashinka caaga ah ee RV-keena xaaskuna way jeceshahay. Tani waxay si fiican uga shaqeyn doontaa guri sidoo kale.
Tuubadaani wey fiican tahay !! Anigu waxaan ahay haweeney 22 jir ah oo qasab ku noqotay inaan ku beddelo qasabaddayda qolkayga maxaa yeelay tii hore ayaa iga jabtay. Khibrad uma lihi inaan beddelo qasabadaha ama nooc kasta oo tuubooyin ah, laakiin tani aad bay u fududdahay in la rakibo. Waxaan daawaday fiidiyowga 1da daqiiqo ah ee Youtube ku saabsan sida loo rakibo tuubada oo aan ku dhammeeyo wax ka yar 20 daqiiqo. Waxay ku timaaddaa tilmaamo, laakiin waxaan ka helay fiidiyowga inuu ka sahlan yahay fahamkiisa iyo raacitaankiisaba. Hadda waa la rakibay, waa mid aad u adag oo aan lahayn wax daadad ah oo cadaadiska biyuhu waa prefect. Si aad ah ugu talin qasabadan!
Runtii aad ayaan ugu faraxsanahay qasabadani. Waxay ahayd qiimo aad u wanaagsan oo aan ku qasbanahay inaan isku dayo. Buufiyeha biyaha sifiican ayuu uga noqdaa waa inaad ku riixdaa oo keliya meesha. Laakiin waxaan jecelahay inaad ka beddeli karto buufin buuxda oo buufin kara oo markii aad sii kordhineysid aad heysato ikhtiyaar aad ku hubiso inaad gacantaada leedahay nadiifin aan ku dhicin daaqaddaada ama dhabarka dambe. Waxaan awoodnay inaanu salka u rogno marka markaan isticmaalayo qalabka wax ku dhaca weligey kuma dhici doono daaqaddayda. Is rogrogmi kara oo fudud!
Cajiib! Tani way ka fiicnayd / fududaatay in la rakibo intii aan moodayay. Waxay u shaqeysaa si heer sare ah, hawsha rakibida waxay ahayd qiyaastii 1/2 saac. Haddii aadan ka baqayn inaad qoyso suurta galnimada inay wasakh tahay saxanka hoostiisa, marwooyin waad samayn kartaa. Lacagtaada ka badbaadi inaad bixiso xirfadle. Hoos u dhig bustayaal duug ah waqti kula qaad tilmaamaha aad u baahan karto xoogaa saliid buufis ah si aad u dabciso xoogaa xajin ah. Si kastaba ha noqotee, tayada qasabadani waxay u qalantaa waqtigaaga iyo lacagtaada. Waan ku faraxsanahay doorashadayda.
Qeybtii ugu adkeyd ee howsha oo dhan waxay ahayd in laga saaro qasabaddii hore ee qasabadda. Waxaa jiray lows aad u yar oo lagala baxay. Waxaan u baahday in aan isticmaalo furka weelka si aan uga saaro. Waxaan aaminsanahay yaa weligiis rakibay tuubadaas isticmaashay qalab qaldan si loo adkeeyo balkaas. Qasabadan waxaan uun ku jeexjeexay dhaqe weyn oo sida lowska gacanta ku adkaystay intii karaankayga ah, ka dibna waan ku darsaday anigoo saddax faallo ku kala jiiday darawal fareero ah. Waxaa jira tilmaamo sida ugu fiican loogu sawirayo sida loo sameeyo.
Marka ganacsade ahaan runtii waan ka shakisanahay markay xaaskeygu soo qaadatay qasabadani in lagu rakibo jikadayada maxaa yeelay midna weligey ma maqal astaanta iyo labo waxay ka hooseeysay $ 75 taas oo sida caadiga ah ka dhigan tahay inaad labo todobaad gudahood ku bedeleyso. Laakiin tani way ka duwanaatay tuubadan ayaa si dhab ah loo adkeeyay waxayna si daacadnimo leh uga fiican tahay qasabad kasta oo aan haysto ama aan ku rakibey shan iyo tobankii sano ee aan ku jiray ganacsiga tuubada ayaa mar labaad iibsan doonta sumaddan si ay isugu dayaan qasabadaha kale.
Waan jeclahay qasabadani. Waa qurux badan oo aad u shaqeynaya. Waa wax cajiib ah in la sameeyo suxuunta iyo karinta laakiin sidoo kale in dhirtayda la siiyo qubeys tartiib ah iyo waraabinta. Aad baan ugu faraxsanahay qasabadani. Iibiyaha ayaa fiicnaaday sheyguna wuxuu ku yimid waqti ku haboon iyo xaalad aad u wanaagsan. Xaqiiqdii waan ka iibsan lahaa iibiyahan mar labaad.
Illaa iyo hadda waxaa loo qabtay si sax ah wixii aan filayay in faalku sameeyo. Ma jiraan wax daadanaya, waxyeellona ma jirto ka dib markii aan ku shiiday dheriyo shilal ah laakiin waxaan haystay dhowr bilood oo keliya, marka tani sinnaba ugama ahaan imtixaan jirdil oo dhammaystiran.
Ku rakibku wax yar buu ahaa, qasabadaha had iyo jeer waa nooc ka mid ah dhibsado in la rakibo maaddaama marin u heliddu ay xaddidan tahay, laakiin marka la barbar dhigo naqshadihii hore oo ay ku rakiban yihiin qalab jajab ah oo u baahan dabool weyn oo ku yaal meel yar, tan ayaa ka fudud. Waan awooday inaan rakibo tan iyada oo aan lahayn gacmo labaad.
Anigu waxaan hayaa qasabadan oo uu igu rakibay handiman markaa kama faalloon karo sahlanaanta rakibidda laakiin waxaan dhihi karaa way qurux badan tahay oo si fiican ayey u shaqeysaa. Way fududahay in la kala beddelo buufin iyo durdur. Badhanka hakadka ayaa si fiican u shaqeynaya, sidoo kale muuqaalka hoos u jiidaya. Waxaan horey u lahaa qasabad hoose oo toosan tanina waa riyo ii rumowday. Waxyaabaha kale ee aan jeclahay waa inaad si fudud ugu buuxin kartaa weelal dhaadheer. Waxay umuuqataa mid casri ah oo casri ah waxayna leedahay dhameystir qurux badan. Waxaan aad ugu talin lahaa qasabadani.
Kaliya waan dhameeyay rakibida tan waana wax cajiib ah. Kani waa marki iigu horaysay ee aan badalo qasabad kaligey ah waxayna igu qaadatay waqti dheeri ah si aan u soo saaro tii hore kadib waxay sameysay mid cusub. Markii aan kii hore banaanka soo saaray, waxay igu qaadatay 8 daqiiqo ka yar inaan rakibo midkan cusub oo ay biyuhu maraan. Waxay ku leedahay muuqaal joogsi weyn madaxa si aadan u baahnayn inaad gaarto si aad biyaha u damiso haddii aad u baahan tahay inaad madaxa ka soo celiso miiska ama wax.
Cutubku waa waxa aan raadinayo si aan ugu beddelo qasabaddii jikada ee hore. Waa wax soo saar qiimo weyn leh marka la barbar dhigo noocyada kale iskaba daa magacyada la magacaabay. Muuqaal wanaagsan, si wanaagsan loo dhisay iyo rakibiddu waa mid aad u fudud. Waxaan jeclaan lahaa inay haystaan ​​ikhtiyaarka madaxa buufin ee aan taabashada lahayn. Waxaan soo iibsaday mid aan ku badelo buufinta waana jeclaaday. Super ku habboon. Waxaan u maleynayaa nashqad noocaan ah inay tahay mid qaan gaar ah oo xitaa haddii aysan ahayn magac magac ah, waa inay si fiican u shaqeysaa. Waan kugula talinayaa
Waan jeclahay! Waxay umuuqataa mid la taaban karo oo sifiican loo sameeyay. Waa casriyeyn weyn oo aan ka helay. Runtii waan jeclahay sida ugu fudud ee ay gadaal iyo gadaal ugu rogrogmadaan iyo sida buufiyuhu ugulaabto meeshiisii ​​si toos ah. Soo iibso weyn marka la barbar dhigo dukaamada sanduuqa lagu iibiyo kuwan boqol doolar ama ka badan. Sababtoo ah waxay ahayd kharash aad u jaban waxaan awood u yeeshay nin gacan yara si uu u rakibo. Haddii kale saacado ayaan ku hoos jiri lahaa saxanka hoostiisa! Lol.
Hooyada qasabaddeeda guriga waxay biloowday daadinta mana dooneynin inay wax ka qabato bedelida dharka iyo waxaas oo dhan. Midkaan helay oo waxaan ku beddelay 30 daqiiqo. Qaaday 20 daqiiqo si aad uhesho midkii hore, yike. Illaa iyo hadda, seddex bilood ayaa laga joogaa welina wey shaqeyneysaa. Waxaan rakibay bilaa saxan hal dalool waxayna umuuqataa IMO weyn. Waxa kaliya ee ay tahay waxay leedahay isku xiraha cusub ee 3/8 ″ oo inta badan baaluqyadii hore waa 1/2 ″ ee iska ilaali taas. Haddii kale, qiimo weyn iyo wax soo saar weyn.
Tuubadaani wey fiican tahay. Waxaan u soo iibinay saxankeena qolka dharka lagu dhaqdo, si aan ugu bedelno tuubada qaaliga ah oo kharashkeedu 3 jeer ka badan yahay laakiin kaliya qaadatay sanado yar. Way fududahay in la rakibo waana muuqaal qurux badan oo shaqeynaya, xaaskeyga ayaa soo jeedisay inaan dhigno saxanka jikadayada ugu weyn. Markay qasabaddeenii cusbeyd ee weelka cusbayd ay dhammaatay waxaan ku beddeli doonnaa mid ka mid ah, ma ahan $ 490. mid (summad kale) oo hadda jirta. Waan jecel nahay, WOWOW Tuubada.
Waxaan ku iibsaday qasabadani badal ahaan gacan qabad 2 daadin ah oo aan wax ka qabanay. Midkani waa qurux badan yahay! Waxay u egtahay sida kuwa dhamaadka sare ee aad ka iibsan karto dukaanka qalabka laakiin qiimo yar. Ninkayga ayaa rakibay. Waxaan haysannay arrin yar markii aan rakibayay, laakiin waxaan u maleynayaa inay ahayd arrin saxan shaqsiyeed oo si fudud loo hagaajiyay markii ninkayga xiirayo xoogaa alwaax ah oo jidka ku jira kana ilaalinaya qasabadda in si buuxda loo adkeeyo. Si buuxda ugu qanacsan iibsashada.
Tuubadaani waxay ahayd neecaw la rakibo. Wuu shaqeeyaa sifiican, waana jeclahay qaabka. Dahaarka madow waa mid jilicsan oo diidaya daabacadaha - taas oo aan ku qanacsanahay tan iyo markii aan ka walwalsanahay inay muujinayso wax kasta oo yar. Waxa kaliya ee aan jeclaan lahaa inay qasabadani yeelato waxay ahayd birlab ama wax la mid ah si ay gacan uga geysato dib u soo celinta qasabadda halkeeda markii aad dhamaysay ka dib markii aad isticmaashay tuubada buufinta. Waxay dib ugulaabaneysaa meeshii kaliya ganaax laakiin waa inaad nooc ka mid ah dib ugu maareysaa gacanta. Tuubada ayaa si habsami leh isugu hagaajisay horay iyo dibba durdurka si ay noogu buufiso ilaa hadda. Ma lahan wax arrimo daadis ah sida qaar faallo looga bixiyay faallooyinka (rakibay 1 bil ka hor). Waxaan leenahay cadaadis aad ugafiican marinkaan hoose marka loo eego kii noogu dambeeyay sidoo kale. Ma aanan isticmaalin astaamaha "hakadka" - waxay umuuqataa bilaa micno marka aad si fudud biyaha u demin karto, laakiin waxaa laga yaabaa in kuwa kale ay tan u arkaan inay faa'iido leedahay. Isku soo wada duuboo, iibsi weyn.
Shayga ayaa si dhakhso leh u yimid. Waxaan ku rakibay Roto-Rooter maxaa yeelay gurigeygu waa 23 jir waxaanan doonayey wixii arrimaha tubooyinka ah ee ay qabtaan xirfadleyaashu. Waxay soo baxday in tuubistuhu leeyahay saxan isku mid ah. Wuxuu ii sheegi jiray sida uu ugu qanacsan yahay. Maalmihii yaraa ee aan isticmaalnay gebi ahaanba waan ku raacsanahay isaga. Aad ayaan sidoo kale u qanacsanahay. Waxaan kugula talinayaa sheygan haddii aad raadineyso casriyeyn weyn oo leh astaamo aad u fiican.
Jeclahay! Tuunbigii hore ee socdey sanadaha OMG, ugu dambeyn wuu fashilmay! Waxaan eegay qaabkan waana ogaa inaan doonayo.
Midkaan soo xushay waanan ku faraxsanahay 100%. Waxay ku shaqeysaa fudeyd, shaqada buufintu waa mid xoog badan oo shaqada caadiga ah ayaa qumman. Qeybtii ugu xumeyd waxaas oo dhami waxay aheyd in mid duug ah lasoo baxo, lowska maqaarka weyn ayaa si aad ah u daxalaystay, waxayna ku yaalliin meel aan macquul aheyn!
Dhab ahaantii qasabad fiican. Tayo wanaagsan. Waxaan filayaa inaan wax badan ku bixiyo mid ka mid ah dukaamada waaweyn ee guryaha lagu hagaajiyo. Aad ayaan ugu faraxsanahay iibsigan. Dhaleeceynta kaliya ee aan haysto waa inaad gacanta ku hubsato in madaxa la taagay isla marka aad hoos u soo jiido. Si otomaatig ah ugama dhex baxo meesha saxda ah iyada oo aan wax yar laga beddelin. Runtii taasi waa walaac yar.
Cadaadiska biyuhu wuu fiican yahay. Waxay leedahay ikhtiyaar buufin fiican iyo xulasho hakad ah.
Way adagtahay. Runtii way fududahay in la rakibo. Waxaan haysanay dhowr kale oo aan rakibin ama aan saarin wax aad u fudud iyo meesha xanuun weyn oo lala shaqeyn karo. Midkani wuxuu ahaa kan ugu fudud. Waan la yaabay sida wanaagsan ee adag. Badhanka uu ku kala beddelayo hawlaha biyaha kala duwan ayaa yara yara dabacsan. Waxaan jeclaan lahaa in xoogaa la adkeeyo si aysan uga dhex dhicin labada hawlood ee biyaha si fudud. Laakiin guud ahaan, Waa wax weyn.
Waxaan aad ugu baahnaa qasabad cusub maadaama qasabadeyda 12 jirka ah ee jikada jirsado ay go aansatay inay tahay waqtigii laquli lahaa laakiin kaba sii darane waxay ka hooraysey hoosta saxanka sidoo kale. Waxaan wacay nin gacan qabta ah ballanta xigta ee furanna waxay ahayd 4 maalmood. Anigu khabiir kuma ahi qasabadaha sidaa darteed waxaan u galay WOWOW oo waxaan dalbaday qasabadan maxaa yeelay waxay lahayd dib u eegis aad u wanaagsan oo layaab leh inaysan qaali ahayn. WOWOW waxay xustay inay imaanayso gurigayga laba maalmood gudahood wayna dhacday. Aad ayaan ugu faraxsanahay iibsigan.
Tuubadaani waxay bedeshay tuubbo buufin oo ah maareyn hore oo kaliya. Xidhmay bedelida buufinta balaastigga iyo tuubbooyinka markay bilaabayaan inay daadadaan. Nikeelkan cusub ee caday ayaa hoos u muuqda oo u muuqda mid casri ah oo qurux badan saxanka jikada ee birta ah ee birta ah! Diyaar u ahaa in la rakibo. Xaqiiqdii hagitaankeyga, carruurteyda 2, 15 jirka ah ayaa beddelay tubbada lafteeda. Kuma dhex guurguuri karo wax uraya sidaan awoodi jiray oo kale LOL Qaybta ugu adkayd waxay ahayd soo saarista qasabaddii hore uc
Ilaa hadda, aad ayaan ugu faraxsanahay iibsigan waana hubaal inaan kugula talin lahaa!
Waxaan ku rakibay qasabaddan jikada! Xaaskeyga wey aragtay waana jeclaaday. Waxaan u soconeynaa inaan fiirino guriga beeraha tanina waxay ahayd sida saxda ah ee aan rabnay inaan si fudud u rakibno xitaa uma baahnid tilmaamo Ma ihi nin anfacaya laakiin waan gartay !!! Waxay igu qaadatay 30 daqiiqo si aan u soo saaro mid hore oo aan u rakibo kan cusub !!! Mid kale ma iibsan lahayd haddaan u baahdo !!! Maraakiibta degdegga ah sidoo kale
Waxay ahayd inaan beddelo qasabadda jikada Moen. Weligood weligood qasabad ma iibsan oo waa lala yaabay qiimaha! Waxaan helay WOWOW oo sicirku wuu fiicnaa sidaa darteed waxaan siiyay tallaal. Waxay umuuqataa mid layaableh, sifiican ushaqayso xitaa waxaan u maleynayaa in cadaadiska biyahaygu kafiican yahay. Saaxiibkay aan rakibay wax dhib ah kuma qabin haba yaraatee.
Qaab dhismeedka qasabadda qasabka ah oo aad u fudud in la rakibo si aad adigu u sameyso. Waxay ahayd inaan ku jaro qasabaddaydii hore ee isku dhafanayd aalad meeris ah maadaama isku xirnaanta ay xumaatay. Isku imaatin cusub ayaa si fudud ugu fududaaday maadaama isku xirnaanta la bixiyay si fiican loo farsameeyay oo looga fikiray. Waxaan aad ugula talinayaa sheygan cidkasta oo danaynaysa inay bedesho qasabada jikada.
Kani waa qasabad qurxoon oo ku habboon jikadahayga. Waxaan u soo iibsaday bedel ahaan tuubada Moen ee 13 jirka ah. Rakiibintu waxay umuuqatay mid sahlan, laakiin waxay ahayd inaan qasabadayda joojiyo si aan u rakibo sababtoo ah marin la'aanta iyo adkaanta ka saarida qasabaddii hore. Wuxuu sheegay inuu aad ula dhacay isla markaana uu rakibay kuwa kale oo sumadan ah sidoo kale. Kama hadli karo cimri dherer sida aan hadda u rakibay, laakiin waa horumar la hubo.
Tayo Sare, dhammaan qaybaha si taxaddar leh loogu calaamadeeyay isku xirnaanta iyo isku imaatinka fudud. Balka weyn ee dheeraadka ah - oo lagu dabaqo sariirta hoosteeda (si loo hubiyo tuubada weelka lagu dhaqo) ayaa aad looga fiicnaaday boodhadhkii hore - way fududahay in gacanta lagu rakibo oo la jiido darawalka. Kani waa qasabaddii ugu horreysay ee aan ku rakibo jikada; marka, haddii aan si fudud ku rakibi karo tan, qof walba wuu awoodaa
Waxaan rakibnay qasabadani dhowr usbuuc hadda illaa iyo iminkana si fiican ayey u shaqeysay. Ma lihin wax daadanaya ama dhadhamin xun Ama uxun sida qaar ka mid ah faallooyinka liita. Ninkayga ayaa rakibay ilaa 30 daqiiqo. Waxay umuuqataa oo dareemeysaa tayo sare waxayna ahayd qiimo aad ufiican kuwa kale. Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan iibsaday tan! Kugula talin lahaa!
Waa qasabad weyn oo qiimaha ah. Waxaan horey u isticmaali jiray qasabado kale oo aad uga qaalisan, laakiin kani si siman ayuu u shaqeeyaa !. Waxay buuxisaa baahiyaheyga gebi ahaanba. Cadaadiska biyaha kushiinkeyga ayaa aad ugafiican tan iyo markii aan badalnay tubadii hore. Waxaan aad ugula talinayaa midkan qiimaha ku ool ah mid ka mid ah mooyee haddii aad raadineyso moodel qaali ah oo noqon doona 3 ama 4 jeer qiimaha.
Waxaan lahaa arrimo rakibidda laakiin taasi waa sababta oo ah saxankeyga ayaa khalad laga dhigay. Kadib markaan xaliyay dhibaatadii way fududahay! Tuubada cusubi waa qurux iyo qurux! Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan haysto qasabad dheer oo aanan mar dambe u baahnayn inaan isticmaalo koobab aan ku buuxiyo weelkeyga dhaadheer ee biyaha. Muuqaalka la soo baxay sidoo kale waa wax weyn!
Tuubada saxda ah waxay ka badneyd $ 200 guriga bakhaarka iyo menards! Waad ku mahadsan tahay inaad lacag badan ii keydisay !!
Tan waxaa loo iibsaday kor u qaadista dayactirka jikada, taas oo bedeshay qasabad 20 + yo ah. sida dhererka oo kale si aad u buuxisid dheri weyn oo aad u nadiifiso. haysashada durdur iyo wax lagu buufinayo dhammaantood hal taabasho badhanka ayaa ah muuqaal aad u fiican, burushka birta birta ah ee birta ah lagu qurxiyo waa wax fiican oo nadiif ah. Qiimo weyn qiimaha.
La iibiyey: 45